Beelaha Gudiga diyaarinaya doorashadda Gud. Gollaha Shacabka | KEYDMEDIA ENGLISH
Beelaha Gudiga diyaarinaya doorashadda Gud. Gollaha Shacabka
Waxaa Maanta Baalamaanka cusub labadiisa Aqal uu yeeshay fadhigiisa ugu horeeyay, oo ahaa mid lagu magacaabayo gudiyo diyaarinaya doorashadda Gudoonka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdisalaam Axmed [Dhanabcad], ayaa ku dhawaaqay gudi ka kooban 10 xubin, oo laga soo xulay Xildhibaanada cusub, kuwaasoo lagu saleeyo hanaanka 4.5.
Waxuu Gudiga diyaarin doonaa doorashadda Gudoomiyaha Gollaha Shacabka, ee bedeli doono Mursal oo kamid ah raggii sida dhaw ula shaqeeyay Farmaajo mudadii uu xukunka haystay.
Akhriso Xubnaha Gudiga iyo Beelahooda.
1- Cabdullaahi Rooble- kasoo jeeda Puntland (Daarood)
2- Mohamed Hussein Hadi- Kasoo jeeda Somaliland (Dir)
3- Cabdirisaaq Cumar- kasoo jeeda Hirshabeelle. (Hawiye)
4- Xuseen Maxamed Nuur- kasoo jeeda Galmudug (Hawiye)
5- Xaaji Cali Max’ed Nuur- Kasoo jeeda Koonfur Galbeed (Digil iyo Mirifle)
6- Maxamed Abukar- Kasoo jeeda Koonfur Galbeed (Digil iyo Mirifle)
7- Dahabo Suusow Maxamud- Kasoo jeeda Hirshabeelle (Beesha 5aad)
8- Qaasim Cilmi Seed- kasoo jeeda Galmudug (Daarood)
9- Cumar Sharif Jeeg- kasoo jeeda Banaadir (Beesha 5aad)
10- Nasro Mahdi Caraale- kasoo jeeda Jubbaland (DIR).
Gollaha Shacabka ayaa berri yeelan doono kulankiisa 2aad, iyadoo ay muuqato in dalka uu u jihaystay jidkii uu ku yeelan lahaa dowlad cusub, oo leh sharciyad, taasoo meesha ka saareysa jahwareerkii jiray iyo hubanti la'aanta.
Mar hadii la doorto Gudoomiye cusub, Baarlamaanka 11aad ayaa talada dalka kala wareegi doono Farmaajo oo kursiga laga fujin waayay labadii sano ee lasoo dhaafay, isagoo ku fadhiya sanadkii 6aad. Soomaaliya ayaa wayn doonto dhaqaalihii Beesha Caalamka iyo taageeradii IMF hadii la gaaro May oo aan dalka ka jirin dowlad cusub.